Namuhla, kunezinhlobo eziningi radiators, kuhlanganise metal izakhiwo anesikhundla ehamba phambili. Ngokombono lobuchwepheshe umbono ibizwa ngokuthi radiators nephupho Ukushisa amadivayisi ehlanganisa izigaba eziningana. Ukwakhiwa ugcwele amanzi ashisayo futhi conduction impahla emoyeni kubanda endlini ukufuthelana. Ukuze metal radiators ukuze ngokugcwele ukufeza imisebenzi yabo, kufanele akhethe okuhle design.
izimiso eziyisisekelo ukukhetha
Umngcele we-eziyisisekelo ukukhethwa Ukushisa kurediyetha metal iyahambisana Ukushisa uhlelo yendlu. Kunezinhlobo ezimbili izinhlobo zezimiso:
Vula - I-emafulethini.
Kuvaliwe - ezakhiweni yangasese.
Ihambisana nawo uhlobo bafudumale system inquma imingcele efanele ezifana:
lokushisa esiphezulu ukusebenza kokupholisayo;
okokusebenza kuyiphi echibini ukushisa ikhiqizwa;
Lezi zibalo ezisohlwini Ukucaciswa kunoma radiators metal. Central Ukushisa kurediyetha kudinga Ukukhetha ngokucophelela njengoba kumelwe akhuthazelele ingcindezi kanye lokushisa, ukhwaliti ongaphakeme amanzi ngokuphepha. Okungathobeli izici lobuchwepheshe izidingo kungadala ingozi ohlelweni Ukushisa noma scrapping we heatsink.
Material uhlobo radiators zihlukaniswe izinhlobo ezilandelayo:
At izindleko Ukushisa imishini zihlukaniswe amakilasi:
Umnotho - indinganiso eziphansi Ukushisa imiklamo atholakalayo ngokukhangisa yisiphi isitolo hardware.
Ephakathi - metallic radiators, kokuba ngcono izakhiwo.
ekilasini Upper - kumadivayisi enziwe mayelana nezidingo ngazinye ikhasimende noma has a design esiyingqayizivele.
lezi zinhlobo ezilandelayo zihlukaniswa lwemsebenti:
Izimpawu metal radiators eziyimisebenzi eziyisisekelo Ukukhetha design zindlela ukusetshenziswa.
Aluminium radiators zingahlukaniswa zibe izinhlobo ezimbili:
onobuhle Sectional kukhona ethandwa kakhulu. Izigaba kuthiwa kuhlobene sisebenzisa imicu nezimpawu hermetic. Lo mklamo ikhange eziphansi kanye ukushabalalisa ukushisa. I yokuntula kukhona ezifweni ukugqwala we ebusweni kwangaphakathi kanye nesidingo ukufaka umphini emoyeni-ukopha.
Ingxubevange radiators umthetho wokwakha yocezu olulodwa, okuyinto usakaze metal ku isikhunta. Libhekene ukuqina okusezingeni eliphezulu nokuzabalazela kungenzeka yokwanda. Yiba ukuphila esiphezulu iminyaka engu-20.
Radiators eyenziwe aluminium ethanda ukusetshenziswa e emafulethini nge hlobo evulekile bafudumale system.
Steel heater kungabuye ihlukaniswe izinhlobo eziningana, okuyinto izici zabo:
Panel metallic radiators bakha isakhiwo izingxenye ezimbili washaya iziteshi amanzi emzimbeni. Engambi eqolo futhi ukushabalalisa ukushisa. Amalungu uqaphele lula ukufakwa sibonga ukukhanya isisindo sayo design.
Radiators metal amapayipi ezibhekwa okuhlala isikhathi eside futhi kunokwethenjelwa ukudlula iphaneli. By oxhumanisa ipayipi nge Welding, lesi sakhiwo umelana nokucindezela futhi izinga lokushisa, kodwa has a intengo ephakeme kanye lenyuka ukufakwa eyinkimbinkimbi.
Steel metal radiators avame ukusetshenziswa emizini yabazalwane nge ngabanye bafudumale system.
inkatho insimbi okwakhiwa ngayo
Ukubukeka zakudala sensimbi radiators kuyinto ajwayelekile kubo bonke, ngoba efakwe zabo nazo kuwo wonke amakhaya eyakhelwe e-USSR. Ziyakwazi eqinile futhi bakwazi ukukhonza amashumi eminyaka.
yensimbi Sakaza ukwenziwa Ukushisa amadivayisi linamandla ukugqwala futhi ompofu izinga lamanzi. Steady ithwala lokushisa nokucindezelwa amathonsi. ukushisa ezingeni ifinyelela 70%, asele 30% iya ku Ukubika Inkinga YeWindows futhi unesandla ekukwenzeni kutholakale Ukushisa izingxenye engezansi isikhala eshubile.
I yokuntula kukhona isisindo okusezingeni eliphezulu, okuyinto nzima kakhulu ukufakwa, kanye ebusweni anolaka kwangaphakathi, okuyinto enomthelela odla kancane kancane ukwakhiwa kanye conductivity abampofu amanzi. Nokho, lokhu kusimo siqedwa ngezikhathi thela uhlelo amanzi azovalelwa okusezingeni eliphezulu. Izindleko heater anjalo incane, nokuphila sevisi iminyaka engu-50.
Lolu hlobo lwe-Ukushisa ubhekwa imiklamo elilungile kakhulu, nakuba eqolo. Sihlanganisa izindawo engcono aluminiyamu futhi ijabulise imikhiqizo. Elinesimo okusezingeni eliphezulu conductivity ezishisayo futhi ukuphila service elikhulu - engu-25. isisindo Khanyisa kunomthelela lula ukufakwa.
Umklamo ihlanganisa aluminium Uhlaka kanye yangaphakathi izingxenye steel amelana ukugqwala. Futhi, ngenxa ezinye izici radiators bimetallic amelana izinguquko ingcindezi, izinga lokushisa futhi khona ukungcola kanye izithasiselo.
Ukushabalalisa ukushisa njengoba kurediyetha eyinhloko Ukukhetha umbandela
ukudluliswa ukushisa izici ezithinta ezingeni kanye izinga amalahle emoyeni ekamelweni, ngakho-ke kubhekwa umbandela esiyinhloko ukukhethwa kurediyetha ekhaya. Lokhu ipharamitha incike impahla kusukela lapho heatsink senziwa. Ukusebenza okuhle ebonwe zethusi nensimbi imiklamo.
Khetha imikhiqizo Ukushisa akuxhomekile nje kuphela esimweni ukudluliswa ukushisa, kodwa futhi inhlanganisela nemingcele, ezifana:
Ukuhambelana yokucindezela Ukushisa uhlelo kanye echibini ukushisa;
Ngenxa yalelo bafudumale system (esalisekela noma ezimbili-pipe);
ukubaluleka ingcindezi ngokucindezela;
Ukuhambelana esiphezulu lokushisa avumelekile amanzi ohlelweni bese kurediyetha;
the diameters kuzo ngemibhobho futhi engxenyeni engaphakathi.
Ukuze eliphezulu ukufudumeza igumbi kudlala indima hhayi kuphela ukushisa Ukushisa design, kodwa futhi nokufuna ukuhambisana nesikhathi yayo kanye nobukhulu indawo egumbini. Ukuze ezindaweni ezinkulu kudinga enkulu Ukushisa isici.
Optimum kurediyetha ububanzi kufanele okungenani 60% of the usayizi iwindi. Kulokhu, kufanele ibekwe ngaphansi sill iwindi at ibanga 6 cm kusukela phansi kanye 10 kusuka window.
Isikrini ukuze umhlobiso kurediyetha
Metal wesibuko radiators isetshenziswa ukuhlobisa zokugcina ngaphansi jikelele ekamelweni elingaphakathi. Ngalo, awukwazi ukwengeza wenduduzo indlu, kodwa futhi ukufihla ukukhubazeka sangaphandle elidala izakhiwo sensimbi. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile sisetshenziswa ukuze kuvikelwe izingane ekusebenzeni contact ngephutha nge isakhiwo eshubile.
I izikrini akhiqizwa ngezinto ezifana nalezi:
Metal elinendawo conductivity eliphezulu ezishisayo kanye akusho ukuphazamisa nokusakazwa emoyeni evuthayo kulo lonke igumbi. Ngaphezu kwalokho, okuhlala isikhathi eside, imvelo futhi kulula ukufaka.
Ngokhuni izimfanelo zokuhlobisa futhi wazakhela ikakhulukazi ukuqinisa izici kokuphothula ingaphakathi. Ngokuvamile esetshenziselwa zokuhlobisa izindlu zasemaphandleni.
Thermoplastic ayibizi futhi kulula-ukunakekelwa impahla. Nokho, ngaphansi kwethonya okushisa aphezulu kungaphansi sokuguga futhi ukuphila kwethu kube elinganiselwe.
ingilazi silicate livame ukusetshenziswa zokuhlobisa, njengoba kukhona ezihlukahlukene imibala, indlela yokwenza kanye nezinye izakhi okuhlobisa.
Ngokuvamile izikrini abanalo izici tekusebentisa asethwe kuphela njengendlela element zokuhlobisa.
Izibuyekezo metal radiators uthi izinga ezinhle izici imikhiqizo, ngenxa okuyinto kukhona Ukushisa okusheshayo izakhiwo kanye nokugcina izinga lokushisa oyifunayo. Ukukhetha kwabo kuncike namandla ezezimali, esizithandayo nezimfuneko design.
"Ukungqubuzana neSwasha": abadlali bedlala iculo lokuphila
Dmitry Vasiliev: umsubathi biography nokuphila kwangasese (isithombe)
Vladislav Demin - Biography, Filmography futhi ukuphila siqu (izithombe)
Kagesi funa isici: etafuleni. Izinsiza kusebenza izitshalo zezimboni
Uma wazi ukuthi likuphi emsipheni sciatic ...
KamAZ 5410 - wokuqala tractor